सम्झनामा नारायणप्रसाद राई र जेफाले मुन्तिरको चियाबारी - Naya Online
शनिबार, अशोज २३, २०७८ (October 9th, 2021 at 8:56am ) ब्रेकिंग न्युज, ब्लग, साहित्य
उन्यु र बुकी फुल्ने उत्तरी मोरङ केराबारी–२, सिंहदेवीमा रहेको पाखोबारी आज हराभरा चियाबारी भएको छ । पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । घुमन्ते फिरन्तेहरूको गन्तव्य बनेको छ । तर तिनै पाखोबारीमा पसिनाको रङ घोलेर उर्वर, हरियाली बनाउने मिहिनेती मान्छे भौतिक रूपमा हुनुहुन्न भनेर शब्दमा लेख्नुपर्दा यी हातहरू कामिरहेका छन् ।
उदाहरणीय कृषि उद्यमी नारायणप्रसाद राई अकल्पनीय रूपमा परलोक हुनुभएको खबरले स्तब्ध भएको छु । नेपालीहरूको महान् चाडहरू दशैँ र तिहार घरको संघारमै आउनै लाग्दा अस्ति असोज १४ (२०७८) गते शनिवार साँझतिर एक्कासि नारायणप्रसाद राई दाईको निधनको खबर कानमा ठोक्कियो । यो खबर सुरुमा पत्याउनै गारो भो तर सामाजिक सञ्जालै भरिको छ्यापछ्याप्ति भयो तब मैले नि माया संसार नथाम्ने रैछ भन्ने महसुस गरेँ र सञ्जालमा त्यस्तै लेखेँ । यो खबरले स्तब्ध नहुने होला र ? आज उनै नारायणप्रसाद राई दाईलाई हात कपाउँदै भए पनि सम्झदैछु । सम्झनभन्दा दाईको निम्ति अरु के नै सक्छौँ र ?
मातृभूमि टि–स्टेटलाई अझै बिस्तार गर्ने, चिया खेतीसँगसँगै पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनाउन वरिष्ठ कलाकार विक्रम श्रीसँग डिपिआर गराउदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सपना, लगनशीलताका कारण चियाबारी क्षेत्रले अर्कै रूप लिने तरखरमा थियो । “मृत्यु पनि मान्छे पिच्छे फरक हुँदो रहेछ….” भन्ने गीत वास्तविक लाग्छन् यतिखेर । साँच्चै नारायण दाइको सवालमा नि त्यस्तै भएझैँ लाग्यो । यस अर्थमा उहाँको फरक ढङ्गको मृत्यु भयो । उहाँले आफ्नो र समग्र ठाउँको एउटा सुन्दर पहिचान स्थापित गर्नुभयो । आफू बितेर गएपनि चियाका पाखाहरूमा, चियाका मुनाहरूमा, जेफालेको फेदीमा समग्र देशकै उदाहरणीय कृषकको रूपमा कृषि कर्ममा तल्लीन, लगनशील र दुरदर्शी सोच उहाँका पर्याय भएर रहिरहनेछन् ।
आफ्ना जीवनसंगिनी बिना खजुमसँग स्व.राई ।
जतिखेर मोरङमा कर्णाली झैँ लाग्ने विकट पहाड मात्रै थियो, मिहिनेती कृषकहरूको हात नपरेको उन्यु र बुकी फुल्ने पाखोबारी मात्रै थिए । साँच्चै भन्नुपर्दा यो विकट पहाडलाई सजाउने सपना बोक्ने मान्छे थिएन । सडक थिएन, बिजुली थिएन र थिएन सूचना र संचार । मोरङको साविक सिंहदेवी गा.वि.स. द्वन्द्वले आक्रान्त बनेको समय थियोे । त्यतिखेर एक दम्पति त्यहीँ पाखामा कृषि क्रान्ति गर्ने सपना देखेर तराईबाट पहाड चढ्नुभो । सधैंको भेटमा नारायण दाइ भन्नुहुन्थ्यो –“शुरूवाती दिन सम्झदा असाध्यै गम्भीर बनाउँछ । उत्साह दिनेहरू भन्दापनि हतोत्साहित बनाउनेहरू धेरै थिए त्यसबेला । यो रुखो पाखोमा के हुन्छ ? के गर्न खोजेका होलान् भन्नेहरूले झन्डै – झन्डै छाडेर हिँडु जस्तो लाग्ने बनाउँथ्यो । तर जीवन संगीनी बिना खजुमको दर्बिलो साथले गर्दा सपनाको नजिक –नजिक पुग्दैछु भाइ ।” उहाँको भनाइ जहिल्यै गुन्जिरहने भयो ।
जेफाले सिर्जना डबलीमा आफ्नो अनुभव राख्दै स्व. राई ।
यतिखेर जेफाले पुग्नेहरू जो कोही चियाबारी नपुगी फर्कदैनन् । उहाँको चिया देश विदेशमा निर्यात हुन्छ । चियाबारी पुग्नेहरू जो कोहीलाई अर्गानिक चियाले स्वागत गर्नुहुन्थ्यो । कृषि कर्मसँगसँगै साहित्य ,सिर्जनालाई असाध्यै मन पराउने उहाँ जहिल्यै उत्साह थपिदिनुहुन्थ्यो । त्यो ठाउँमा साहित्यिक गतिविधि बढाउन उत्साह थप्ने प्रेरक व्यक्तित्वहरू मध्ये एक नारायणप्रसाद राई हुनुहुन्थ्यो ।
“जेफाले सिर्जना डबली”लाई अति माया गर्नुहुने नारायण दाईले “जेफाले सिर्जना उत्सव–२०७८” भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको थियो, र उहाँसँगको अन्तिम भेट पनि त्यो नै थियो, त्यसपछि उहाँसँग भेट हुन पाएन । राजनीति, धर्म र अन्य विभाजनका कुनै पनि विषयले नछोएको विशुद्ध कृषि पर्यटनको विशाल सपना बोकेर हिडेका नारायण दाइले थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कार पाउनु भएको थियो । मातृभुमि टि–स्टेट (चियाबारी)बिना जेफालेको सुन्दरता अपुर्ण भएझैं चियाबारी नारायण दाइबिना हरियो भएर पनि उजाड बनेको आभाष हुनेछ जो कोहीलाई, केही समय । अब उहाँकी जीवनसाथी बिना खजुम उहाँहरूका छोरा र छोरीहरूको काँधमा आएको छ चियाबारीलाई हराभरा बनाउने जिम्मेवारी र दिवंगत नारायण दाईले देख्नुभएको सपना पूरा गर्ने । त्यो सपना पूरा गर्न हाम्रो पनि काँध पनि उत्तिकै जाँगरिलो हुनेछन् ।
शोकलाई शक्ति बदलेर उहाँका अधुरो सपना पूरा गर्ने साहस मिलोस् शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै नारायण दाइप्रति मन नमानी नमानी भन्दैछु भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, अल विदा नारायाण दाई ।
जेफाले मुन्तिरको चियाबारी , जसको परिकल्पना गरेका थिए र पछि परिकल्पनालाई उनै स्व.राईले साकार पारेका थिए ।